Ciidamada Xoogga dalka gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee DANAB ayaa dhaq dhaqaaqyo Ciidan & howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab waxa ay ka wadaan tuulooyin hoos yimaada degmada Aw-dheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose .
Ciidamo ka tirsan Kumaandooska Soomaaliya ayaa saaka gudaha u galay deegaanka Malable ee hoostaga degmada Aw-dheegle ee gobolkaasi,halkaas oo ay horay ugu sugnaayeen Al-Shabaab sida ay xaqiijiyeen Saraakiisha Ciidanka Xoogga dalka.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada Qalabka sida oo la hadlay Warbaahinta Dowladda ayaa u sheegay in ay howlgalka ka wadaan deegaannada Al-Shabaab kaga suganyihiin Gobolka Shabeellaha Hoose.
Ciidankaan Dowladda Faderaalka Soomaaliya ayaa saakay ka baxay Degmadda Owdhiig waxaana saraakiisha hogaaminaysa Ciidankaan sheegeen in ay ku wajahanyihiin deegaano kale oo tirsan Gobolka Shabeelaha Hoose.
Al Shabaab dhankooda kama hadlin sheegashada Ciidanka Xoogga Dalka oo ah in ay qabsadeen Deegaanka lagu Magacaabo Malab oo hoos taga Awdhiigle.
Ciidamada Dowladda ayaa shalay la wareegay degmada Aw-dheegle iyo deegaanno hoos yimaada oo ay mudo dhowr sano ah ku sugnaayeen a Al-Shabaab.